Vaovao - Ny indostrian'ny diagnostika vitro farany teo dia nitondra vanim-potoana fampandrosoana haingana
Novel coronavirus pneumonia novel coronavirus pneumonia no laharam-pahamehana indrindra amin'ireo laharam-pahamehana. Ny indostrian'ny pnemonia coronavirus (IVD) dia hivoatra haingana amin'ny fivoaran'ny teknolojia vaovao isan-karazany sy ny catalysis ny pnemonia satro-boninahitra vaovao. Antenaina fa ho lasa iray amin'ireo tsena miasa sy haingana indrindra amin'ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana amin'ny ho avy izy io.
Ny teknolojia vaovao, ny maody vaovao ary ny fangatahana vaovao dia manokatra habaka vaovao
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny biotechnology, ny haben'ny tsenan'ny indostria diagnostika vitro manerantany dia mitombo haingana. Raha ny angon-drakitra an'ny tambajotra diagnostika in vitro diagnostika (caivd), tamin'ny 2013, ny haben'ny tsenan'ny indostrian'ny diagnostika vitro eran-tany dia manodidina ny $ 60 miliara, ary nihoatra ny 80 tapitrisa dolara amerikana tamin'ny taona 2019, miaraka amin'ny taha mitombo isan-taona an'ny 6%. Antenaina fa ny haben'ny tsena dia hihoatra ny $ 90 miliara dolara amin'ny taona 2020 (jereo ny sary 1 ho an'ny
Raha ny fitsipika sy ny fomba fitiliana dia azo zaraina ho sehatra lehibe enina izy io: immunodiagnosis, diagnostika biokimika, fitiliana ra, famaritana molekiola, fitiliana mikraoba ary diagnostika eo noho eo (POCT). Avy amin'ny firoboroboan'ny tsena diagnostika vitro manerantany, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny fihenan'ny tsenan'ny diagnostika biokimika klinika sy ny vokatra immunodiagnosis dia nihena kely, raha nitombo isan-taona kosa ny tsenan'ny famaritana asidra nokleika, mikraoba, histolojia ary cytometry mikoriana. miaraka amin'ny salan'isa fitomboana mitombo isan-taona mihoatra ny 10%. Amin'ny taona 2019, ny immunodiagnosis no manana ny tsena lehibe indrindra, mitaky 23%, arahin'ny diagnostika biokimika, mitaky 17% (jereo ny sary 2 raha mila tsipiriany).
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, teknolojia vaovao sy maodelin'ny indostria diagnostika in vitro manerantany no nipoitra. Nisokatra ny teknolojian'ny diagnostika molekiolan'ny solontenan'ny taranaka roa (NGS), ny vokatra fikarohana amin'ny fotoana maharitra izay soloin'ny chip microfluidic, ary ny teknolojia ary ny maodely vaovao toy ny fitantanana fahasalamana maoderina sy ny fikarakarana ara-pahasalamana marina, soloin'ny angona be sy Internet plus. efitrano vaovao ho an'ny indostrian'ny diagnostika in vitro. Miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka ny teknolojia diagnostika in vitro sy ny fampiharana betsaka ny siansa sy ny haitao farany mifandraika amin'izany, ny tsena diagnostika manerantany amin'ny vitro dia hitazona fironana fitomboana maharitra. Ankoatr'izay, mihabetsaka ny tobim-bahoaka, ary mitombo ny tahan'ny aretina mitaiza, homamiadana ary aretina hafa. Izy io koa dia mampiroborobo ny fampandrosoana tsy tapaka ny tsena diagnostika in vitro.
Natosiky ny fanafainganana ny fahanteran'ny mponina, ny fahombiazan'ny teknolojia fanavaozana ary ny dividendan'ny politika, ny indostrian'ny diagnostika in vitro any Shina dia nitombo hatrany. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny indostrian'ny diagnostika in vitro dia nivelatra haingana, ny orinasa eo an-toerana sasany dia nahavita fandrosoana tamin'ny teknolojia, ary ny orinasa sasany eo an-toerana kosa dia nitombo haingana entin'ny fitakiana tsena anatiny lehibe. Ho fanampin'izay, tato anatin'ny taona vitsivitsy, namoaka andian-pahefana maromaro i Shina hanohanana ny fampandrosoana ny indostrian'ny diagnostika in vitro. Ohatra, misy ny politika fanohanana mifanaraka amin'izany ao amin'ny drafitra dimy taona faha-13 momba ny fanavaozana ny siansa sy ny haitao momba ny haitao, ny drafitra dimy taona faha-13 ho an'ny fanavaozana bioteknolojia sy ny drafitra drafitra ara-pahasalamana China 2030, izay manentana kokoa ny fivelaran'ny indostria.
Mety hanan-kery ny tsena ankehitriny
Amin'ny ankapobeny, ny fampandrosoana ny tsena IVD manerantany dia tsy mitovy. Raha ny fahitana ny fizarana isam-paritra, ny Amerika Avaratra, ny Eropa Andrefana ary ireo faritra mandroso ara-toekarena dia mitentina mihoatra ny 60% ny anjaran'ny tsena; raha ny fahitana ny fizarana tsenan'ny orinasa dia efa ho ny antsasaky ny fizarana tsena dia nalain'i Roche, Abbott, Siemens ary Danaher. Sina dia tsena mipoitra ao amin'ny indostrian'ny diagnostika in vitro, izay ao anatin'ny vanim-potoana fitomboana haingana ankehitriny ary azo antenaina amin'ny ho avy.
Amin'izao fotoana izao, ny toekarena mandroso toa an'i Amerika Avaratra sy Eropa Andrefana dia mitentina mihoatra ny 60% amin'ny tsena diagnostika in vitro manerantany. Na izany aza, ny firenena mandroso sy ny tsena isam-paritra dia niditra tamin'ny dingana matotra manana fivoarana somary milamina ary fitomboana miadana. Any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana, amin'ny maha-indostria vao misondrotra azy, ny diagnostika in vitro dia manana ny mampiavaka ny tahan-kely sy ny taham-pitomboana avo. Antenaina fa amin'ny tsena vao misolo tena an'i Shina, India ary firenena sy faritra hafa, ny tahan'ny fitomboan'ny tsenan'ny diagnostika in vitro dia hijanona 15% ~ 20%. Ny tsena mivoaka dia ho lasa iray amin'ireo faritra mety indrindra amin'ny indostrian'ny diagnostika in vitro.
Ny indostrian'ny diagnostika in vitro ao Shina dia nanomboka tamin'ny faramparan'ny taona 1970 ary ankehitriny dia ao anatin'ny vanim-potoana fivoarana haingana. Amin'ny taona 2019, ny haben'ny tsenan'ny indostrian'ny diagnostika in vitro ao Shina dia manakaiky ny 90 miliara yuan, miaraka amin'ny taha-taha mitombo isan-taona mihoatra ny 20%. Tao anatin'izay 10 taona lasa izay, orinasa maherin'ny 20 eo an-toerana amin'ny diagnostika vitro no nahomby tamina IPO, ary Mindray ara-pahasalamana, Antu biolojika, BGI ary Wanfu biolojika dia nanjary orinasa lehibe tamin'ny sehatra tsirairay avy. Ny entana be mpampiasa (toy ny diagnostika biokimika sy ny diagnostika eo noho eo) dia nahatratra ny haavo iraisam-pirenena tamin'io fe-potoana io ihany. Mitovy amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny Roche, Abbott, Danaher, Siemens ary hysenmecon dia mitentina 55% mahery amin'ny tsenan'i IVD any Shina. Orinasa maro an'habakabaka mampiasa ny tombony azony amin'ny vokatra, teknolojia ary serivisy hampitomboana tsy tapaka ny fampiasam-bolany any Chine, indrindra ny hopitaly tertiary anatiny sy ny tsena avo lenta, izay matetika ambony kokoa noho ny an'ny vokatra mitovy aminy ny vidiny. Ao amin'ny fisorohana sy fifehezana ny pnemonia coronavirus amin'ity taona ity dia miseho ny mason'izy ireo mamiratra. Ny orinasan'ny andrana fahatelo dia nanatsara ny satan'ny rafitra fitsaboana ary antenaina hanao asa fitiliana aretina bebe kokoa.
Ireo reagents diagnostika in vitro dia entam-panjifa azo ampiasaina ary tsy hihena ny fangatahan'ny tsena. Ny tsenan'ny diagnostika in vitro anatiny dia lavitra ny hahatratra ny "valindrihana". Mbola maro ny saha tsy masaka novolavolaina, ary ny indostria dia hitazona fironana fampandrosoana milamina sy haingana amin'ny ho avy.
Tombam-bidy tsara ho an'ny fizarana telo lehibe
Amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, ny indostrian'ny diagnostika in vitro ao Shina dia hiditra amin'ny vanim-potoana fivoarana matanjaka amin'ny famaritana molekiola, ny immagniagnosis ary ny diagnostika eo noho eo.
Amin'izao fotoana izao, ny fitomboan'ny tsenan'ny indostrian'ny famaritana molekiola any Shina dia haingana, ambany ny fifantohan'ny indostria, kely ny elanelana misy eo amin'ny orinasa anatiny sy ivelany, ary samy manana ny fahaizany manokana ny orinasa tsirairay avy.
Raha ny antontan'isa dia tamin'ny 11,58 miliara yuan ny haben'ny tsenan'ny indostrian'ny famaritana molekiola any Shina; ny salanisan'ny fitomboan'ny fambolena isan-taona hatramin'ny 2011 ka hatramin'ny 2019 dia hahatratra 27%, eo amin'ny avo roa heny amin'ny taha fitomboan'ny tany. Ao amin'ny tsenan'ny diagnostika molekiola any Shina, ny orinasa vahiny vatsian'ny vola 30% dia miompana indrindra any amin'ny faritry ny rojom-pivarotana, miaraka amin'ny vokatra avy amin'i Roche, ny PCR an'i Abbott izay manana ny laharam-pahamehan'i IL Lumina no solontena; Ny orinasa eo an-toerana dia mitaky ny 70% amin'ny tsenan'ny vokatra, ary ny orinasany dia mifantoka indrindra amin'ny reagents diagnostika PCR sy serivisy diagnostika ngs. Anisan'ireo orinasa solontena ny biolojika Kaipu, biolojia fanampiana, gén Huada, gèry berry, biolojia Zhijiang, géné Daan, sns.
Betsaka ny mpandray anjara amin'ny tsenan'ny famotopotorana molekiola any Shina, ary ambany ny fifantohan'ny indostria. Ny antony lehibe mahatonga an'io trangan-javatra io dia ny filan'ny klinika voarohirohy amin'ny famaritana molekiola maro sy sarotra, ary ny mpandray anjara amin'ny tsena tsirairay dia samy manana ny mampiavaka azy ara-teknika sy ny sehatry ny fahaizany, noho izany dia sarotra ny manarona tanteraka ny orinasa rehetra, ka sarotra ny mamorona. lamina fifaninanana manjakazaka.
Ny teknolojia famaritana molecular dia ahitana indrindra ny PCR, trondro, ny filaharana misy ny gena ary ny puce gen. Mandritra ny fotoana maharitra, ny habaka fampiroboroboana ny teknolojia fandefasana gena dia midadasika kokoa, saingy lafo kokoa ny vidiny. Ny teknolojia PCR dia mbola teknolojia mahazatra eo amin'ny sehatry ny famaritana molekiola. Mba hahafahana manao asa tsara amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, orinasa marobe momba ny fizahana molekiola ao an-toerana no namorona kitapo asidra nokleona coronavirus vaovao, ary ny ankamaroan'ireo kitapo ireo dia mampiasa teknolojia PCR be fluorescent, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana ny valanaretina sy mifehy ary mitondra ny indostrian'ny famaritana molekiola manontolo hanana fanantenana tsara.
Amin'izao fotoana izao, ny tsena immunodiagnosis no tsena lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny diagnostika in vitro any Shina, izay mitentina eo amin'ny 38% amin'ny tsena diagnostika in vitro iray manontolo.
Maherin'ny 60% ny anjaran'ny tsena immunodiagnosis any Shina no anjakan'ny orinasa vatsian'ny vola avy any ivelany, fa ny 30% fotsiny amin'ny tsenan'ny orin'asa eo an-toerana toa ny fitsaboana Mindray, Mike biolojika, biolojika Antu, sns. avo ny fifantohana. Orinasa manana famatsiam-bola avy any ivelany dia mitentina 80% ~ 90% amin'ny tsena avo lenta ny immunodiagnosis any Shina miaraka amin'ny tombotsoan'ny teknolojia vokatra mandritra ny taona maro, ary ny mpanjifany dia hopitaly tertiary indrindra; Ny orinasa eo an-toerana dia manafaingana ny fizotry ny fanoloana ao an-trano amin'ny alàlan'ny tombony amin'ny fahombiazan'ny vidiny sy ny reagents mifanentana.
Diagnostika eo noho eo
Ny tsenan'ny diagnostika tena izy any Shina dia taraiky ary tara ny tsena ankapobeny. Na izany aza, tato anatin'ireo taona faramparany, ny tahan'ny fitomboan'ny tsena dia nitazona hatrany 10% ~ 20%, avo lavitra noho ny taha fitomboan'ny 6% ~ 7%. Raha ny angom-baovao, amin'ny taona 2018, ny tsenan'ny diagnostika tena izy any Chine dia hahatratra 6,6 miliara yuan, hahatratra 7,7 miliara yuan amin'ny taona 2019; I Roche, Abbott, merier ary orinasa hafa vatsian'ny vola avy any ivelany dia hibodo toerana lehibe eo amin'ny tsenan'ny diagnostika avo lenta an'i Shina, miaraka amin'ny 90% ny tsena; ireo orinasa eo an-toerana dia misongona tsikelikely amin'ny fiolahana miaraka amin'ny tombony vidiny sy ny fanavaozana ny teknolojia.
Ny famaritana eo noho eo dia afaka mamokatra vokatra haingana, izay tsy voafetra amin'ny tranokalan'ny fanandramana, fa mitaky fahaiza-manao matihanina ambany ho an'ny mpandraharaha. Izy io dia mety amin'ny andrim-pitsaboana eny ifotony, ary koa hopitaly lehibe, toy ny vonjy taitra, marary an-tsokosoko, fitiliana areti-mifindra mialoha ny fandidiana, fanaraha-maso ny aretin'ny nosocomial, fidirana an-toerana fidirana, fanaraha-maso ataon'ny mpiasa fidirana sy ny tranga hafa . Noho izany, ny mety, miniaturika ary mety amin'ny famaritana haingana ny vokatra fitiliana diagnostika tena izy dia hanana anjara toerana lehibe kokoa amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny diagnostika vitro amin'ny ho avy. Amin'izao fotoana izao, ny orinasam-pitsaboana solontena tena izy any Shina dia misy ny biolojia Wanfu, ny biolojika Jidan, ny biolojika Mingde, ny biolojika Ruilai, ny gén Dongfang, ny biolojia any Aotai, sns.
Amin'ny alàlan'ny fandinihana feno ny fiantraikan'ny toe-javatra misy ny valanaretina sy ny fanantenana amin'ny fampandrosoana ny tsena, dia afaka mahita isika fa tsara ny firoboroboan'ny tsena sy ny Prospect ny famaritana molekiola, ny diagnostika ary ny diagnostika eo noho eo dia tsara. Miaraka amin'ny anjara asany lehibe amin'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina, ny diagnostika in vitro dia ho voahiahy sy eken'ny tsena bebe kokoa, ary izy io dia ho iray amin'ireo faritra mety hitranga indrindra amin'ny sehatry ny fitaovam-pitsaboana ao anatin'ny taona vitsivitsy.